Ukunikezwa kwamanzi ashisayo okushisayo kwendlu yangasese nefulethini kungenye yezindaba eziphuthumayo zansuku zonke zesikhathi sethu. Ngokuya ngesimiso se-heater yamanzi, zihlukaniswe zibe izinhlobo eziningana. Phakathi kwazo kukhona amagumbi okugcina kagesi, amadivaysi okushisa angaqondile, ama-gas models, ukuhluka kwezinto ezihambayo. Ukuguqulwa okuthandwa kakhulu yilabhisi yokugcina isitoreji. Cabanga ngesakhiwo salo, izici zokusebenza, kanye nezilinganiso ezikhona kanye nokubuyekezwa kwabathengi.
Ukuze siqonde isimiso se-heater yamanzi, sizofunda idivayisi yayo. Kuyinto elula futhi eqondile. Ngesikhathi esifanayo, kubhekwa njengamayunithi angokonga futhi anokwethenjelwa. Ukusebenza kwebhisikidi kusekelwe ezintweni ezimbili eziyisisekelo: itangi kanye ne-element element (TENe).
Ukubheka ngokukhethekile ekukhiqizeni amadivayisi okubhekwa njengokushisa amanzi kubhalwa ukugqoka kwangaphakathi. Izinto zokukhiqiza kwamathangi ngokuyinhloko iyinsimbi ekhethekile eqinisiwe. Kuyinto enamandla futhi imelana nokubola. Ingxenye yangaphakathi yamathangi ihlanganiswe ne-glass-porcelain, enezinzuzo ezihlukahlukene futhi iyingxenye yezinkampani ezinezinga eliphezulu lokungathathi hlangothi kwamakhemikhali. Lokhu kubangelwa isakhiwo esikhethekile sekristallini sezinto. Emathangi nalesi sakhiwo, amanzi ngisho nangemva kokusebenza kwesikhathi eside ahlala ehlanzekile futhi ebala.
Indlela i-heater yamanzi yokugcina amanzi esebenza ngayo
Ngaphakathi ngaphakathi kwebhayili kukhona amapayipi akhethekile anesibopho sokubanda kanye nokukhethwa kwamanzi ashisayo. I-liquid in the tank iphethwe kusuka ngezansi. Khona-ke isatshalaliswa ngokulinganayo kulo lonke ivolumu ngosizo lomhlukanisi we-jet olunikeziwe. Lokhu kukwenza kubangele ukuhamba kancane kancane kwamanzi ashisayo engxenyeni engenhla, kusukela lapho kuthathwa khona.
Isimiso sokusebenza kwe-heater yamanzi siseduze nokusebenza kwe-thermos ngokushisa, kanti izingxenye zamanzi okushisa ahlukahlukene azihlanganisi, okwenza kube lula ukuthola amanzi afudumele ngendlela efanayo. Izakhi ezilandelayo zihilelekile ekusebenzeni kwe-boiler, etholakala egumbini lensimbi:
Isici sokufudumala se-nichrome alloy ngendlela yokuvutha nge-casing casing;
Isilawuli somshini (thermostat);
I-Anode eyenziwe nge-alloy magnesium, ekwehliseni umphumela wokushisa emgodini wangaphakathi we-tank.
I flange iyasuswa, igxile emzimbeni ngamunye.
Amaphuzu aphambili omgomo wokusebenza wamanzi okushisa ahlobene nokuphepha kwawo, ngoba ihlanganiswe nenethiwekhi kagesi. Kule nkinga, kune-thermostat yamabili. Ikuvumela ukuba ushintshe kahle izinga lokushisa, futhi wenze umsebenzi wokuzivikela, cisha idivayisi phambi kokushisa okubalulekile. Uma izinga lokushisa elingaphakathi lifinyelela emkhawulweni, kutholakala idivayisi yokuphepha, okuvimbela ama-heaters ngokushesha. Emoyeni evamile, lapho izinga lokushisa kwamanzi liwela ngamadridi angu-2-3, izakhi ezakhiwe zishisa uketshezi kanzima kunani elinqunyiwe. Esinye isici esivikelayo is valve yokuhlola, okuvimbela ukudalwa kwengcindezi eyengeziwe kuleli tangi.
Amapayipi okushisa angaqondile
Lezi zixhobo zokushisa aziklanyelwe ukukhiqizwa kwamandla okushisa azimele. Okunye ukuguqulwa kungahlonywa nge-element edidiyelwe yokushisa, okuyinto enesibopho sokugcina izinga lokushisa elithile liketshezi. Ekusebenzeni okuvamile, i-unit iyatshisa amanzi nge-coil enamanzi ahlanzekile angaphakathi. Ngezansi uhlelo kanye nesimiso somshini wokushisa ongaqondile ngqo.
Emathonjeni amakhulu e-cylindrical of volume enkulu, ikhoyili yakhiwe ngaphakathi, lapho i-coolant ephuma kubhuyili ifakwe khona. Amanzi abandayo ahlinzekwa, njengokwenziwe kagesi, kusukela phansi, ukugeleza kwamanzi ashisayo avela phezulu. Ngokujwayelekile, inhlanzi yamanzi enjalo isetshenziselwa amakhaya anenani elikhulu labathengi, ngoba likwazi ukuhlinzeka ngamanzi ashisayo ngesamba esibalulekile.
Izici zabashayeli bezinhlobo ezingaqondile
Isimiso sokusebenza kwe-heater engaqondile ukushintshanisa phakathi kwamakamelo anamazinga ahlukene okushisa. Kumele kucatshangelwe ukuthi ukuthola amanzi ukusuka kumathinomenti angu-50 ukushisa kwe-coolant kumele okungenani kube ngu-75 °. Lokhu kuyinkinga ethile yebhayili. Enye ingozi ukuthi kuthatha isikhathi eside ukulayisha ngokugcwele itanki elikhulu, elingahambisani nokusetshenziswa okujulile kwamanzi ashisayo.
Ukushisa okungaqondile emklamo kune-magnesium anode, futhi ukuguqulwa okubi kakhulu nokubizayo kunamakhoyili, okunye okungasetshenziswa ngokuvumelana nesimiso esivamile, kanti enye ingaxhunyaniswa nomthombo wokulondoloza. Kungaba umqoqo welanga, i-heater eyengeziwe noma i-boiler yesibili.
Idivaysi kanye nomgomo wokusebenza kwama-heaters wamanzi onhlobo olungavumelekile bavumela ukuwakhiqiza efomeni nasesiteji, ngokubambisana nanoma yimiphi imithombo yamandla. Ngokuvamile lezi zingxenye zihamba kanye nama-boilers amabili. Lokhu kuvumela ukusebenzisa i-generator efudumele ukugcina ukushisa okusethiwe, ukushintsha phakathi kwezinhlelo uma udinga ukulayisha ithangi.
Lezi zinsimbi zangaphandle neziklamo zifana nezifanekiso zokugcina ugesi. Uhlelo luhlanganisa itanki lensimbi elinomshini wokushisa, olomiswe odongeni. Esikhundleni sokushisa okushisa, ukushisa kwenziwa kwishisa elifakwe engxenyeni engezansi, futhi ukuphuma kwesikhumbuzo kunikezwe phezulu. Isimiso sokushisa kwamanzi okugcina isitoreji ukushisa amanzi emva kokushiswa komlilo. Yonke inqubo ifana nalokho okwenzeka esampula kagesi.
Ukufudumala okungeziwe kwe-liquid kwenzeka ngokususa ukushisa okuvela ezakhiweni zomlilo. Lokhu kuhlinzekwa ngabakwa-cutters e-flue steel abadabula itanki futhi banikele ukushisa emanzini. Iyunithi ye-elekthronikhi elawula ilangabi ibhekene nokusebenza kwe-burner, kuye ngokushisa okudingekayo. I-magnesium anode inikezwa ukuvikela ngaphakathi kwecala. Amayunithi anjalo awadingeki kakhulu, ngoba adinga imvume ekhethekile kusuka kumasevisi afanele kanye nemishini ye-chimney ehlukile.
Idivaysi kanye nesimiso se-boiler yokushisa ukushisa kwamanzi uhlobo luhluke kakhulu kumamodeli wokugcina. Iyunithi yenzelwe ukufudumala okusheshayo kwamanzi asebenzayo njengoba kudingeka.
Kunemithombo emibili yamandla yalezi zixhobo. Okukhethwa kukho kuqala kuhlanganisa ukushisa kwegesi, okufakwa kulokho okwenzeka ngokuvumelanisa ngokuvula amanzi okuphepha. Uhlobo lwesibili ukugeleza kagesi-ngokusebenzisa ama-heaters. Njengoba izakhi zokusebenza zisetshenziselwa i-TEN, ebuye isebenze ngokufakwa kwe-crane.
Kufanele kuqaphele ukuthi ikholomu yegesi ineklanywa okuyinkimbinkimbi futhi idinga ukubandakanyeka kochwepheshe onolwazi. E-analog kagesi, amanzi aphikisanayo asetshenziselwa ukushisa ngamandla kagesi, okudlulisela amandla okushisa emanzini. Idla amandla amaningi kakhulu, ngakho-ke inomkhawulo olinganiselwe. Inzuzo yalo mhlangano ubukhulu obuhlanganisiwe nokufakwa okulula.
Kukhona i-boiler-type boiler ngokusho kohlobo lomshini wokushisa kwamanzi. Ngenxa yokunikezwa kwamanzi ashisayo, isebenza ngesimiso sokubilisa ngokushisa okungaqondile, kuphela ukudlulisa ukushisa kohlobo lwamanzi ngendlela yokugeleza.
Uma ukhetha ukuguqulwa okuthile, qaphela ukugqoka kwangaphakathi kwe-tank. Yenziwe yenziwe ngensimbi engagqwali, titanium noma ingilazi-porcelain. Kumele uqaphele ukuthi, naphezu kwentengo ephansi nezinye izinzuzo zamuva, kunamaphutha amaningi, okungukuthi:
Isikhathi senkonzo esincane esifushane (iminyaka engaphansi kweminyaka emithathu);
Ukungaqondakali kokukhubazeka nokwakhiwa kwesakhiwo ngenxa yokuhluka kwezinga lokushisa.
Ama-boilers, abagqoke ngaphakathi kwabo ensimbi noma e-titanium, banesiqinisekiso seminyaka engu-7 ukuya kweyishumi.
Ngaphezu kwalokho, isibonakaliso esiphezulu sokusetshenziswa kwamanzi ashisayo kufanele sicatshangelwe, ukhethe umthamo ofanele kanye nomthamo wevolumu.
Njengoba kuboniswe izimpendulo zabathengi, isimiso sokusebenza kwesitoreji samanzi kagesi esilondolozwa yiyona engcono kakhulu. Izinzuzo zalolu hlobo zihlanganisa lezi zinto ezilandelayo:
Ikhono lokukhetha ithangi levolumu edingekayo;
Isikhathi eside sokugcina ukushisa kwamanzi;
Ukulula okuhlobene nokusebenza;
Impilo yesikhathi eside.
Ukungahleleki kwabasebenzisi kufaka ubukhulu obukhulu be-boiler, hhayi isilawuli esivumelana ngaso sonke isikhathi, isidingo sokuvimbela ngonyaka.
Ukufakwa kwepompo yokuhambisa ukushisa. Ukukhethwa kwepump, ukufakwa, imiyalelo
Ibhodi lokudonsa "Nika" - inketho enhle kakhulu kumkhiqizi wasekhaya
Ibhizinisi lokuthengisa. Imishini yekhofi: ukufakwa, ukugcinwa, intengo, ukubuyekezwa
I-Bosch PSR 1200 - i-screwdriver elayishwa kabusha. Izici, incazelo, ukubuyekezwa
Ungakhetha kanjani ukushisa amanzi ngamakamelo?
"Merz" dragees. Izibuyekezo kanye Tips
Kungani iphupho ulwa enikulo umhlanganyeli noma ingqapheli?
Ephansi fat cottage shizi. Mayelana kunganambitheki, kodwa ewusizo
UVladimir Vinokur: Biography, empilweni yakho, umsebenzi
"Madeleine" (amakhukhi): isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Abadlali Russian: "Izwe kuyinto Kiddies ezinhle"
Ummeli wezebhizinisi: imisebenzi. Incazelo kaJobe yommeli webhizinisi
I-wheel crane yesibhamu: amamaki, idivayisi, izici zobuchwepheshe